Amanqaku amaRoma Sulla Martech Zone
Amanqaku ngu UmRoma Sulla
I-Roman yangena kwihlabathi ledatha yedijithali kwi-2013. Uye wakwazi ukuthatha inxaxheba kwimikhombandlela emininzi: umphuhlisi wangaphambili, isikhokelo sangaphambili, isikhokelo sophuhliso, umnini wemveliso, kunye neNtloko yeMveliso. Kananjalo, uthathe inxaxheba ekuphuhliseni umkhondo wokucofa; Izixhobo zeCRM zearhente; izixhobo zokuququzelela nokuvavanya iinkqubo zokuthenga zosasazo; kunye nenkonzo yewebhu yoluntu ukuqhagamshela abathengi kunye nabathengi kunye nokuqinisekisa unxibelelwano olusebenzayo phakathi kwabo. Ukusukela ngo-2019 ebesebenza Ubeko.it